Ye-Mon's Personal Pages: April 2009
၂၉၊ ၄၊ ၂၀၀၉
သူဌေးရောဂါလား အမေရိကန်ရောဂါလား ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ဒီလောက် ဖုန်ထူတဲ့ နိုင်ငံက လာပြီး အခုမှ လေထိမခံ အမေရိကန် ဖြစ်နေလေရဲ့။ ၂၀၀၆ လောက်ကတည်းက စတာ။ ဒီရာသီဆို အချိန်မှန် ရောက်ရောက်လာတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဆေးကျောင်းဖတ်စာအုပ်တွေထဲမှာ နားစွန်နားဖျား ကြားဖူးပါရဲ့။ ၀တ်မှုန်ကူးတဲ့ ရာသီမှာ ဖြစ်တတ်သော ဓါတ်မတဲ့ခြင်း (seasonal allergy) တဲ့။
ရောဂါ လက္ခဏာတွေကတော့ မျက်စိယား၊ မျက်ဝတ်ထွက်၊ နှာချေ၊ နှာခေါင်းပိတ်၊ နှာရည်ယို။ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုလို့သာဆိုး။ ဟတ်ချိုး တစ်ခါ နှစ်ခါနဲ့လည်း မပြီး။ ဘာမီတွန်လောက်နဲ့လည်း မရ။ မနေ့ကဆို အတန်းထဲမှာ ဟတ်ချိုးချေတာ အရမ်းကျယ်လို့ လူတွေ လန့်ကုန်ကြတယ်။ ၀က်တုပ်ကွေးကလည်း ခေတ်စားနေတယ် မဟုတ်လား။
ဖြစ်နေတာတော့ သုံးပတ်လောက် ရှိပြီ။ မျက်လုံးတွေယားပြီး ယောင်ကိုင်းနေတာ ဖိုးကပ် (focus) တောင် မမိတော့ဘူး။ ဆေးကျောင်းမှာတုန်းက ဒီလို ဓါတ်မတဲ့တာမျိုးကို ဘယ်လို ကုရမယ်လို့ သင်ခဲ့ရင် သင်ခဲ့ဘူးမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သေသေချာချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ ကုနေပေမယ့် အခုတော့ ဆရာမနိုင် ဖြစ်လာပြီ။
ညကတော့ အတော့်ကို ဆိုးတာ ကိုယ့်မှာ နှာခေါင်း မရှိတော့ဘူးလား အောက်မေ့ရတယ်။ အိပ်လို့လည်းမရလို့ တစ်ညလုံး ငုပ်တုပ်ထိုင်နေရတယ်။ နှာခေါင်း လုံးဝပိတ်နေတော့ ပါးစပ်နဲ့ပဲ အသက်ရှုလို့ရတော့တယ်။ ပါးစပ်နဲ့ အသက်ရှုရတော့ အာခေါင်ကခြောက်။ ရေသောက်မယ်ကြံတော့ နှာခေါင်းပိတ်လွန်းလို့ တံတွေးတောင် မမျိုနိုင်။ စကားလည်း မပြောချင် မပြောနိုင်။ ပါးစပ်က အသက်ရှုမလား၊ တံတွေးမျိုမလား၊ အစာစားမလား၊ စကားပြောမလား ... အကုန်လုပ်လို့ရပေမယ့် နှာခေါင်းမရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာတော့ တစ်ချိန်မှာ တစ်ခုပဲ လုပ်လို့ရတော့တယ်။ (မရှိတော့မှ တန်ဖိုး သိနေတာ) သေရေးရှင်ရေးဆိုတော့လည်း အသက်ရှုတာကိုပဲ ဦးစားပေးရတာပေါ့။ ညစာလည်း မစားဖြစ်တော့။
အသက် မျဉ်းမျဉ်းရှုပြီး တရားမှတ်နေရင်း ဒီစိတ်တွေ ဘယ်ပြေးနေလဲ ကြည့်လိုက်တော့ ...
ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ နှာခေါင်း ပိတ်ချင်ဦးဟဲ့ ဆိုပြီး ၀က်နှာခေါင်းနဲ့ လဲတတ်ရင် ကောင်းမလား (နှာခေါင်းပေါက် ကျယ်လို့) ... မဖြစ်သေးပါဘူး ... ကျန်းမာရေးအာမခံက နှာခေါင်းအစားထိုးတာကို ပေးမယ် မထင်ဘူး ... အခုနေ ပါးစပ်ကပါ အသက်မရှုနိုင်တော့ရင် ဘာဖြစ်သွားမယ် ထင်လဲ ... အင်း အခန်းထဲမှာက ပစ္စည်းတွေ ဗလပွပဲ ... လာသိမ်းရမယ့်လူတော့ မလွယ်ဘူး ... ဘွဲ့လေးတောင် မရပဲ .. လျောသွားလို့ကတော့ ... အသက်မရှုနိုင်လို့ ကိစ္စချောသွားလေသူကြီးလို့ နာမည်ကြီးဦးတော့မှာပဲ ... ကျောင်းမှာတုန်းက သင်ရတဲ့ အေ၊ဘီ၊စီ (Airway, Breathing, Circulation) ဒီလောက် အရေးကြီးမှန်း အခုမှ ကိုယ်တွေ့ပဲ ... အသက်မရှုနိုင်တော့မှ နိုင်းဝမ်းဝမ်း ခေါ်ရင် မှီပါ့မလား ... အိမ်ရှင်ကို နှိုးပြီး ဒုက္ခပေးရမလား ... ဟော အကြံရပြီ အေးရင် သွေးကြောကျဉ်းမယ် ဒါဆို အရောင်လျော့မယ် ... နှာခေါင်းပွင့်မယ် ... ကိုင်း မတိမ်းမစောင်းပဲ ချွတ်နင်းသံနဲ့ မီးဖိုထဲ သွားရအောင်။
နှာခေါင်းကို ရေခဲ အုပ်လိုက်တော့မှ နည်းနည်း နေသာထိုင်သာ ရှိသွားတယ်။ ကုသနည်း ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှုလို့ ရတာကိုက အရှင်လတ်လတ် နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသလိုလို။ ရေခဲအုပ် ရပ်လိုက်တာနဲ့ နှာခေါင်းက ပြန်ပိတ်။ ဒါနဲ့ပဲ ရေခဲပြန်အုပ်နဲ့ မိုးလင်းသွားရော။
မိုးလင်းတော့ ဆရာဝန် နဲ့ ချိန်းထားပြီး ဖြစ်လို့ သွားပြပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အာမခံရှိတော့ “၀ါးခ” မပေးရဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်က လက်နက်ကြီးတွေ ထုတ်သုံးတော့ “ဆေးဖိုး” က ဒေါ်လာ ၁၆၀ ကျော် ကျလေရဲ့။ “တစ်ခါယား တစ်သိန်းခွဲ” ဆိုတော့ “အာယိုးယိုး” အော်ရတော့တာပေါ့။ ဆေး ၄-မျိုးမှာ တစ်မျိုးကပဲ ဈေးကြီးတာပါ။ Singulair (Montelukast) တဲ့။ ဓါတ်မတဲ့ရာကနေ ထွက်လာတဲ့ leukotrienes ဆိုတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းကို ဓါတ်ပြယ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ ခေတ်မီ ဆေးလို့ အလွယ် ဆိုကြပါစို့ရဲ့။ ဆေး အလုံး ၃၀ ကို ဒေါ်လာ ၁၂၀ ဆိုတော့ ဆေးတစ်လုံးကို ၄ ဒေါ်လာလောက် ကျသဗျို့။
ကဲ ... မိတ်ဆွေတို့ရော ... ယားချင်ကြသေးလား ...
8 comments Labels: seasonal allergy
Listed universities of our country
၂၀၊ ၄၊ ၂၀၀၉
International Association of Universities တွင်
ယူနက်စကို (UNESCO) လက်အောက်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များ အသင်း (International Association of Universities) ၀က်ဆိုဒ်တွင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ တက္ကသိုလ်များ စာရင်းကို ပြုစုထားရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများ တက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားလျှင် ၄င်းတက္ကသိုလ်များက လျှောက်ထားသူများ ယခင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်သည် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် ဖြစ်မဖြစ်ကို ဤစာရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးတတ်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များအနက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များ အသင်း၏ စာရင်းတွင် ပါဝင်သော တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များကို အောက်ပါ ၀က်ဆိုဒ်မှ တဆင့် သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မူပိုင်ခွင့် အတားအဆီးရှိသောကြောင့် တက္ကသိုလ်များ စာရင်းကို ဤဘလောက်ပို့စ်တွင် ဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို ခွင့်လွှတ်စေလိုပါသည်။
3 comments Labels: education
George Owell wrote in "Animal Farm" as follows:
"All animals are equal, some animals are more equal than others"
Harnlay -a cartoonist from the Irrawaddy magazine - illustruated vividly as follows:
1 comments Labels: cartoon, nargis, poverty
It is 33 years old, yet, still true to today. I saw that in my former boss's office years ago, and, again today in the class of "Poverty, Economic Development, and Health" and very much would like to share it with you all.
"Adult Education and Development" September 1976
Original source: http://www.geocities.com/shores_system/development_set.html
5 comments Labels: development, quote
Donors for humanitarian aid
၉၊ ၄။ ၂၀၀၉
လူမှုကူညီရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ရန်ပုံငွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီရန်ပုံငွေတွေကို ဘယ်က ရပါသလဲ။ အကြမ်းဖျဉ်း လေးမျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Individual donors (တစ်ဦးချင်း အလှူရှင်များ)
Private foundations/ Philanthropic organizations (ပုဂ္ဂလိက ဖောင်ဒေးရှင်းများ)
Bilateral donors (နိုင်ငံ တစ်ခုချင်းအလိုက် အလှူရှင်များ)
Multilateral donors (နိုင်ငံတကာ စုပေါင်း အလှူရှင်များ)
တစ်ဦးချင်း အလှူရှင်များ ဆိုတာကတော့ နာဂစ်ဖြစ်တုန်းက တစ်ရာတန်သည်၊ နှစ်ရာတန်သည် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လှူကြတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လို အလှူရှင်မျိုးတွေပေါ့။
ပုဂ္ဂလိက ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ ဆိုတာကတော့ သူဌေးတွေ ဖွဲ့ထားတဲ့ လူမှုကူညီရေး အသင်းအဖွဲ့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကားမှာ နာမည်ကြီးတာတွေ ကတော့ ဖို့ဒ်ဖောင်ဒေးရှင်း (Ford Foundation) ဂိတ်စ်ဖောင်ဒေးရှင်း (Bill and Melinda Gates Foundation) စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
3. Bilateral donors
နိုင်ငံ တစ်ခုချင်းအလိုက် အလှူရှင်များဆိုတာက အလှူရှင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံက အခြားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကို တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းတာမျိုးပါ။ ဥပမာ - အမေရိကန် နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသအတွက် ဆန်တွေ လှူတာမျိုးကို ခေါ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းလှူတာဖြစ်နိုင်သလို ငွေကြေး လှူဒါန်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အကူအညီပေးတဲ့ အစိုးရ လက်အောက်ခံ ဌာနတွေကို သြစတေးလျနိုင်ငံမှာဆိုရင် AusAid (The Australian Government's overseas aid programme) အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် DFID (UK Department for International Development) အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် USAID (United States Agency for International Development) နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဆိုရင် JICA (Japanese International Cooperation Agency) စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
4. Multilateral donors
နိုင်ငံတကာ စုပေါင်းအလှူရှင်များ ဆိုတဲ့ အထဲမှာတော့ နိုင်ငံ တစ်ခုထက်မက ပါနိုင်သလို ပုဂ္ဂလိက အသင်းအဖွဲ့တွေလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အမျိုးအစား (၂) နဲ့ (၃) ကို ရောစပ်ထားတာပါ။ ဥပမာ - GAVI (The Global Alliance for Vaccine Initiative) ဆိုရင် ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေ (WHO & UNICEF) နဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အပြင် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါ ပါဝင်ကြပါတယ်။ နောက်ဥပမာ တစ်ခုကတော့ ဂလိုဘယ်ဖန် (Global Fund for AIDS, TB, and Malaria) အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှူငွေ ရရှိတဲ့ နေရာတွေ အမျိုးမျိုးကွဲပြားသလို အလှူငွေ တောင်းခံပုံတောင်းခံနည်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကလည်း ကွဲပြားကြောင်း သတိချပ်ပါ။ အသေးစိတ် သိလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ၀က်ဆိုဒ်များမှာ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
0 comments Labels: donors, humanitarian aid, public health
I would like to share you the photos that I took yesterday at National Cherry Blossom Festival 2009.
To see my album click the following link:
10 comments Labels: cherry, general, photo
ပြည်သူ့ကျန်းမာ အတိုင်းအတာများ (မိတ်ဆက်)
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းတွေ အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ “အတိုင်းအတာ” ဟာအခြေခံကျပေမယ့် မကြာခဏ လျစ်လျူရှုခံရတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ “ငါတို့က စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးနေတာပဲ၊ ပြီးရောပေါ့” ဆိုပြီး တစ်လွဲ ဆံပင်ကောင်း တတ်သလို။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ “တို့နေရာ ဒေသ အခြေအနေနဲ့ ဒီလောက်ပဲ ရမှာပဲ အရမ်းတိကျချင်နေလို့ ဘယ်ရမလဲ” ဆိုပြီး လက်လျော့စကား ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒီ့အပြင် “မင်းတို့ နိုင်ငံခြားက သင်လာတာတွေနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ မကိုက်ဖူး” ဆိုတဲ့ လွယ်အိတ်တွေလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါတင်မက လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို လာရောက် စစ်ဆေးတဲ့ အဖွဲ့တွေကိုလည်း “လာပြီး ရစ်နေသူတွေ” လို့ မြင်တတ်ကြသေးတယ်။
ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် လော့ဒ်ကယ်ဗင် ခေါ် ၀ီလီလျှံသော်မဆင် ပြောခဲ့တာလေးနဲ့ စရအောင် …
1824 – 1907
(စကားချပ်။ ။ လော့ဒ်ကယ်လ်ဗင် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ရူပဗေဒ သင်ရတုန်းက အပူချိန်တိုင်း ယူနစ်တွေဖြစ်တဲ့ စင်တီဂရိတ်၊ ဖာရင်ဟိုက် တွေနဲ့ အတူ သင်ခဲ့ရတဲ့ ဒီဂရီကယ်လ်ဗင် ကိုတီထွင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။)
သူဆိုလိုတာက “တိုင်းတာလို့ မရဖူးဆိုရင် တိုးတက်အောင်လည်း လုပ်လို့ မရပါဘူး” တဲ့။ တိုတိုနဲ့ အင်မတန် ထိမိတဲ့ စကားလေးပါ။ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်မှာ အလျား၊ အချိန်၊ အပူချိန်၊ အလေးချိန်တွေကို တိတိကျကျ တိုင်းတာလို့ ရနေတာကိုး လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောပါလေ။ ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေမှာ တိုင်းတာရ ခက်တာတွေကလည်း အများကြီး ရှိနေတာကိုး။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရမယ် ဆိုရင် စိတ်ညစ်တာကို ဘယ်လိုတိုင်းကြမလဲ။ ငါးမူးဖိုး စိတ်ညစ်တယ်၊ တစ်ကျပ်ဖိုး စိတ်ညစ်တယ် လို့ ပြောမလား၊ သေလောက်အောင် စိတ်ညစ်တယ်လို့ ပြောမလား။ စာမေးပွဲ တစ်ခုတည်းကို အတူတူကျကြတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကတော့ ဘာမီတွန်သောက်သတ်သေတယ်၊ တစ်ယောက်ကတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အထိုင်မပျက်ဘူး ဆိုရင် ဘယ်လို ပြောမလဲ။ ဒီလိုဆိုလိုက်လို့ စိတ်ညစ်တာကို တိုင်းလို့ မရဘူးလို့တော့ မထင်စေချင်။ Psychometrics လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို တိုင်းတာတဲ့ နည်းလမ်းတွေ သုံးရင် စိတ်ညစ်တဲ့ ပမာဏကို သိနိုင်ပါမယ်။
နီးစပ်တဲ့ ဥပမာလေး တစ်ခုနဲ့ ပြောချင်တယ်။ ခုခံအားကျရောဂါ ကာကွယ်ရေး စီမံချက် တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်တယ်။ ငွေတွေ သိန်းသန်း ချီပြီး သုံးတယ်။ အချိန်လည်း ၃-၄ နှစ်လောက် ကြာသွားပြီ။ ဘာအကျိုးရှိသလဲလို့မေးလိုက်တော့ … လက်ကမ်းစာစောင် ဘယ်နှစ်စောင် ဝေပါတယ်၊ ပညာပေး အစီအစဉ် ဘယ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ပါတယ်၊ တက်ရောက်သူ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ အပေါ်ယံ ကိန်းဂဏန်းတွေလောက်ပဲ ပြောနိုင်ပြီး ပြည်သူလူထု ကျန်းမာရေး အတွက် ဘယ်လောက် ထိရောက်သလဲ ဆိုတာကိုတော့ မပြနိုင်ဘူး ဆိုရင်ဖြင့် စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းထဲက စာသားကို ပြန်ပြောချင်တယ် .. “ .. ဘယ်လောက်ပင် ချွေးထွက်ပါစေ အရွေ့ မရှိရင် အလုပ် မဖြစ်ဘူး ..”
ဟုတ်ပါတယ်။ သေလောက်အောင် တွန်းနေပေမယ့် ကိုယ်တွန်းနေတဲ့ အရာက တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်ဖူးဆိုရင်တော့ ချွေးပြိုက်ပြိုက်ကျရုံမက နှလုံးလေဟတ်ပြီး မတ်တပ်က လဲသွားတောင် “အလုပ်” မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကိုမှ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့က တစ်နေ့ကို ဘယ်နှစ်နာရီ တွန်းပါတယ်၊ ချွေး ဘယ်နှစ်ဂါလံထွက်ပါတယ်၊ ချွေးအစားထိုးဖို့ ဘီယာ ဘယ်နှစ်ကပ် သောက်ရပါတယ်၊ ၀န်ထမ်း ဘယ်နှစ်ယောက်ကို ဆေးရုံပို့လိုက်ရပါတယ် ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ လျောက်ပြောနေမယ်ဆိုရင် လူရယ်စရာဖြစ်ပါမယ်။ ဒီသာဓက ဟာ စာရှုသူအမြင်မှာ သိသာပေမယ့် ပြည်သူ့ကျန်းမာ စီမံချက်တွေမှာတော့ အခုလောက် မသိသာလှပါဘူး။ တကယ့်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ လေ့လာမှ သိနိုင်ပါမယ်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာ လုပ်ငန်းတွေ စီမံချက်တွေဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ကြတာပါ။ အင်မတန် မွန်မြတ်ပါတယ်။ ဒီမွန်မြတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ပြည့်မှီသလား မပြည့်မှီဘူးလား ဆိုတာကို စီမံချက်တွေမှာ ပါဝင် အကောင်အထည်ဖော်နေသူတွေ အနေနဲ့ သေသေချာချာ တိုင်းတာဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဘာကို ရချင်လို့ လုပ်နေသလဲ ဆိုတာကို သိကို သိရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်လေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ နာဂစ်ဖြစ်အပြီး ရွာတစ်ရွာကို ရောက်သွားတော့ ဆေးလာကုတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ ဆုံပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ ဆရာဝန်လေးတွေကို စကားစမြည် ပြောရင်း ဒီလို ရွာစဉ်လိုက်ပြီး ဆေးကုတာ ဘယ်အချိန်လောက်အထိ လုပ်မှာလဲလို့ စာရေးသူက မေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်လေး ပြန်ဖြေတာက “ဒါကတော့ စီမံချက် မန်နေဂျာ သွားခိုင်းနေသရွေ့ သွားနေမှာပါ” တဲ့။ အဲဒီဆရာဝန်လေး အနေနဲ့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်က ဘာအတွက် လုပ်နေတာလဲ ဘယ်အချိန်အထိ လိုအပ်သလဲ ဆိုတာကို သိပုံမပေါ်ပါဘူး။ အလှူရှင်ရှိလို့၊ အလှူငွေတွေ ရနေလို့ လိုက်ပြီး ဆေးကုနေတာလို့ ယူဆတယ် ဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
ပြန်ပြီး အနှစ်ချုပ်ရရင် အောင်မြင်တဲ့ စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ အတိုင်းအတာဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ အနည်းဆုံးအောက်ထစ် အနေနဲ့ တိုင်းတာဖို့ လိုတာက စီမံချက် မစမီ အခြေအနေနဲ့ စီမံချက် ပြီးဆုံးပြီး အခြေအနေ နှစ်ရပ်ပါ။ ဒါမှလည်း မိမိရဲ့ စီမံချက်ဒေသမှာ နဂိုရှိရင်းစွဲ အခြေအနေကနေ တိုးတက်လာသလား၊ ဆုတ်ယုတ်သွားသလား ဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တိုးတက်လာတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီလို တိုးတက်မှုဟာ ကိုယ့်စီမံချက် လုပ်ငန်းတွေကြောင့် တိုးတက်တာလား၊ သူ့အလိုအလျောက် တိုးတက်နေတာလား ဆိုတာကို ဆက်ပြီး ဆန်းစစ်ရပါမယ်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာ စီမံချက်တွေကို တိုင်းတာရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခြေခံ ကိန်းဂဏန်းတွေအကြောင်း ဆက်လက် ဖော်ပြပါဦးမယ်။
2 comments Labels: burmese, introduction, measurements, public health